Ninkii aflagadeeyey Nabi Muxamed CSW oo Muslimay & ilmo ka qubatey markii..+SAWIRO – SBC
Posted by editor on April 29, 2013 Comments
Arnoud Van Doorn oo ah nin u dhashay wadanka Holand isla markaana ku caan ahaa nacaybka Islaamka si weynna ugula dagaalamay Diinta Islaamka iyo Ummada Muslimiinta wadankiisa Holand iyo guud ahaan Qaarada Yurub kana tirsanaa xisbiga Mayal adage ee Freemdo Part ayaa dhawaan soo Islaamay, wuxuuna booqasho ku tagey wadanka Sacuudiga gaar ahaan Labada Xaram ee Barakeysan ee Makka & Madiina.
Van Doorn markii uu booqdey qabriga Nabigeenna Muxamed CSW ilmo ayaa ka soo qubatay, wuxuuna ku calaalay “Rasuulkii ALLOW, Rasuuleygiyow i Cafi”, isagoo taasi ula jeeday in uu xadgudub ba’an u geystey Nabi Muxamed CSW mudadii uu ku sugnaa jidka baadilka isagoo aflagaado xoogan kula kacay Suubanaheenna Muxamed Nabadglayo & Naxariis dushiisa EEBE ha yeelee.
Maalintii uu xaqa rumeeyey Around ee uu qiray ALLE SWT & Rasuulkiis CSW, wuxuu ku cadeeyey Bogiisa Twittre-ka
Wareysi gaar ah oo uu siiyey Van Doorn wargeysyada Okaz & Saudi Gazette ee ka soo baxa wadanka Sacuudiga wuxuu ku yiri:
Arnoud Van Doorn oo Kitaabka Qur’aanka ka gaduumaya Sheekh C/raxmaan Sudeysi
“Waxaan nolasheyda inta ka dhiman u huri doonaa faafinta fariinta runta ah ee Islaamka & Nabi Muxamed CSW, waxaana sameyn doonaa filim aan kaga hadli doono taariikhda qiimaha badan ee Nabi Muxamed CSW”.
Arnoud Van Doorn oo ay bahwadaag & jaal ku ahaayeen Islaam Nacayb Ninka ku caanbaxay cunsirimada Muslim nacaybka ee lagu magacaabo Geert Wilders wuxuu ka hadlay mar kale sida ay uga go’an tahay in uu Islaamka kor u qaado:
“Waxba ulama hari doono inaan ka qayb qaato difaaca xuquuqda Muslimiinta ku dhaqan dhamaan Qaarada Yurub, waxaana sidoo kale u shaqeyn doonaa Islaamka, iyo dhamaan inta raacsan ee dunida guudkeeda saaran, waxaana isku dayi doonaa inta karaankeyga ah inaan dib u hagaajiyo intii aan aflagaado iyo xumaan ka faafiyey Nabiga CSW, gaar ahaan Filimka Fitna”.
Filimka aqlaaqda xun ee Fitna waa filim uu qoray Cunsiri Geert Wilders, waxaana Van Doorn uu ka qayb ahaa filimkaasi oo si ba’an Islaamka iyo Nabigeenna Muxamed CSW si waxuushnimo ah loogu gefay.
Arnoud oo isagoo salaad ku jira soo galiyey bogiisa Twitter-ka (maashaa ALAAH)
Van Doorn wuxuu sabtidii (20-kii April 2013) uu tagey Masjidka Nabiga ee magaalada Madiina, wuxuu sidoo kale Axadii uu tagey Makkah isagoo halkaasi ku cimreystey, wuxuuna kula kulmay Madaxa arimaha labada xarameyn Sheikh Abdulrahman Al-Sudais & Mashaa’ikh kale oo ka mid ah golaha Culimada Sacuudiga & Islaamka.
“Aad ayaan uga qoomameynayaaa inaan qayb ka ahaa filimkaasi, si kastooy ahaataba mawduucaasi hada waxaa xirmay, mana doonayo inaan dib u soo xusuusto, filimka oo dhaliyey caro xoogan wuxuu ahaa mid guud ahaanba qalad ku ah xisbigeenna waayo waxaa naloo soo gudbiyey warbixino qaldan & marin habaabin la xiriira diintan quruxda badan & Nabiga SCW” ayuu yiri Doorn oo sidoo kale farta ku goday in uu sameyn doono dib u hagaajin la xiriirta dhibaatada uu keenay filimka Fitna.
Arnoud oo la shiraya madaxa hay’ada daacabada Kitaabka Qur’aanka ee Madiina
Van Doorn wuxuu go’aansadey in uu kala shaqeeyo hay’ada fadhigeedu yahay wadanka Canada ee Canadian Dawa Association (CDA) ee faafinta diinta Islaamka sidi loo sameyn lahaa filim ka sheekeynaya wanaaga Diinta Islaamka iyo Taariikha Nabigeenna Muxamed CSW.
“Waxaan u adeegsan doonaa dhamaan qibradeyda soo saarista filimkan oo ah mid lidi ku ah kii aan ka qayb qaatey ee Fitna, waxaana filinkan kaga hadli doonaa runta islaamka & dhamaan tilmaamaha & shakhsiyada Nabi Muxamed NNKH, si la mid ah wanaagiisa” ayuu hadalkiisa sii raaciyey Van Doorn.
Van Doorn wuxuu ku macneeyey ka qayb qaadashadii filimka Fitna iyo waliba dagaalkiisii ka dhanka ahaa Islaamka mid ay ku xambaartey jaahilnimo, isagoo xusey inaanu aqoon badan u laheyn Islaamka & Nabi Muxamed CSW, wuxuuna tibaaxay in indho la’aantaasi yo xog qaldan oo la siiyey ay ku xambaartey in uu Islaamka si xun u aflagaadeeyo.
“Markii aan xaqiiqsadey in Islaamku aanu aheyn diin xun waxay aheyd markii aan go’aansadey inaan si wanaagsan u barto Diinta, waxayna taasi dhabaha u xaartey inaan Muslim noqdo, hadda aad ayaan ugu raaxaysanayaa quruxda Islaamka si aan xadi laheynna ayaana ugu faraxsanahay naxariista ALLE ayaan helay maadama uu igu duway dariiqa saxdda ah” ayuu yiri Van Doorn.
Arnoud Van Doorn wuxuu ku nuuxnuuxsadey in ay aad uga xanaaqsan yihiin xubnaha xisbigiisa Freedom Part go’aankiisa ku aadan qaadashada diinta Islaamka.
“Xisbigu wuxuu ka soo horjeedaa Islaamka iyo waliba ku faafitaankiisa Yurub, qaar ka mid ah xubnaha Xisbiga waxay igu tirinayaan khaa’in” ayuu hadalkiisa sii raaciyey Van Doorn oo sidoo kale farta ku fiiqay in ay ugu wacan tahay arimaha ay aamisan yihiin xubnaha xisbigiisa jahli ka haysta Islaamka iyo Muslimiinta.
Van Doorn wuxuu mahadcelin u diray dhamaan intii taageertey siisay kuna amaantey nolashan cusub ee Muslimka.
“Waxa dhacay ee aan xaqiiqsadey waa riyo mana rumaysan karo inaan hada ku suganahay Magaalada Barakaysan, taasi oo ah magaaladii soo dhaweysay Nabi Muxamed CSW, ma xakameyn karin dareenkeyga markii aan horistaagay qabriga Nabiga CSW iyo goobta Rawdah Sharif ee uu nabigu ku tukan jirey, waxaa indhahayga soo buuxisay ilmo, waxaan dareemay sida in aan dhexjoogo Janada” ayuu yiri Van Doorn.
Doorn wuxuu qiray in uua aad ula yaabay sida weyn ee ay Muslimiintu u jecel yihiin Nabi Muxamed, isgaoo arintaasi ka hadlaya wuxuu yiri:
“Waxaan kaloo xaqiiqsadey dareenka weyn ee nacayb ee qaar ka mid ah reer Galbeedku u hayaan Islaamka iyo Nabiga CSW, waxaana taasi oran karaa inay ugu wacan tahay jaahilnimadooda iyo go’aan gaaristooda dhiciska ah ama deg deg ah”.